सत्य बोल्न, देख्न र बुझाउँन गाह्रो हुन्छ : झुठ सजिलै पत्याइन्छ ! – Hamro Pusta
पावल घर्ति २५ भाद्र २०७७, बिहीबार ०८:३८
अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ – झुठले संसारको दुई फन्को लगाइसक्दा सत्य घरबाट निस्कन भर्खर जुत्ताको तुना कस्दै हुन्छ । (A lie travels around the globe while the truth is putting on its shoes)
➡️➡️ यसबारे फेसबुकमा भेटेको एउटा कथा यस प्रकार छ :
झुठले सत्यलाई फकायो, “उखर्माउलो गर्मी छ । हिड्दा हिड्दा असिनपसिन नै भइयो । अब इनारमा पसौँ र मज्जाले नुहाऔँ ।” यसमा पनि सत्यले नकारेन ।
अनि झुठ त्यसबेला देखि नै सत्यको भेषमा संसारभर घुमेको घुम्यै छ । सत्यको आवरणमा ढाकिएको उसलाई सबैले मन पराएका छन् । नग्न सत्यको रुपलाई समाजले स्विकार्न चाहेको छैन । त्यसैले नग्न सत्य गायब छ, लुकी राखेकै छ ।
(राजन पौडेल )
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै किन ? अर्को महिला
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १९:२९
१७ भाद्र २०७७, बुधबार ०८:५२